डा‌. केसीको अनशनमा अरुले नै राजनीतिक रोटी सेकेको प्रधानमन्त्रीको दाबी - समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले डा. गोविन्द केसीको अनशनको नाममा अरुले रोटी सेक्ने काम गरेको बताएका छन् ।
नेकपा केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले डा. केसीको अनशनमा कांग्रेस मिसिएको समेत जिकिर गरे। 'सरकारले केसीको उपचार गर्न नपाउने? उनको नाममा अरुको राजनीतिको रोटी सेक्ने, बाटो छेक्ने? यो हुन सक्दैन', उनले भने।
उनले सबैको निःशुल्क स्वास्थ्योपचार र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नेकपाले पहल गर्दै आएको बताउँदै सबै समस्याको समाधान संवाद र संसद्बाट टुङ्गिने जनाए। प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य सेवाजस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा कर्मचारीले हडताल गर्नु उचित नभएको बताउँदै प्राडा केसीलाई सघन उपचार आवश्यक पर्ने भनी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट लिखित सुझाव आएकाले उनलाई काठमाडौँ ल्याइएको पनि स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसप्रति आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भए। उनले संविधानबमोजिम संसद्ले कानून बनाउने लोकतान्त्रिक विधिबाट अघि बढ्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलाई आग्रह समेत गरे।
काँग्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको सर्वोच्चता मानेर अगाडि जान तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्दै भने, 'संसद्ले कानून बनाउँछ, कांग्रेस मान्न तयार छ कि छैन? संवैधानिक बाटो चुनावबाट सरकारलाई अपदस्थ गर्न सकिन्छ, म लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा आउन काँग्रेसलाई चुनौती दिन्छु। संघर्षको मैदान हामीले पनि देखेका छौँ। अलोकतान्त्रिक, प्रतिक्रियावादी र जनविरोधी कुनै पनि प्रयास सरकारलाई अस्वीकार्य छ र त्यसलाई नियन्त्रण गरिनेछ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिष्टहरु मिलेको र स्थिर सरकार बनेकामा प्रतिक्रियावादीहरुलाई सही नसक्नु भएको बताए। उनले भने, “काँग्रेस यति चाँडो वस्त्र उतारेर मैदानमा उत्रिएको छ। हिजो हाम्राविरुद्ध टाउकाको मूल्य तोकेको होइन? झोलामा टाउको ल्याउनु भनेको वा सर्वस्वसहित जन्मकैद तोकिएका मान्छे शासन गरिरहेका छन्, अनि उनीहरुलाई चित्त बुझ्छ?”
उनले काँग्रेसले खोजेको लोकतान्त्रिक प्रणाली, मूल्य र मान्यतामा अझै प्रश्न रहेको आरोप लगाउँदै सामन्ती राजतन्त्रमा फर्केर आउन सक्ने विचार पनि काँग्रेसमा रहनु प्रतिगमनकारी विचार भएको र आफूहरु राजतन्त्रको पक्षमा नरहेको पुनः स्पष्ट गरे।
प्रतिक्रान्तिसँगको लडाइँ जारी छः दाहाल
पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कम्युनिष्टहरुको एकता र निर्वाचनबाट बनेको दुई तिहाइको सरकारविरुद्ध नियोजित षड्यन्त्र गरी भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको बताए।
'हामीले चुनाव जिते पनि क्रान्ति जितेका छैनौँ। प्रतिक्रान्ति र क्रान्तिकारीबीचको लडाइँ जारी छ। प्रतिक्रियावादीहरुलाई कम्युनिष्ट एकता र स्थिर सरकार मन परेको छैन तर हामी त्यस्ता षड्यन्त्रलाई सफल हुन दिने छैनौँ' उनले भन्। उनले भए/नभएका कथाहरु बनाएर सरकार र नेकपाको विरोधमा भ्रम छर्ने काम भएकाले क्रान्तिलाई सफल बनाउन र स्थिर सरकारको विरुद्ध सबै हतियार प्रयोग गरेर भइरहेका नियोजित षड्यन्त्र चिर्न आह्वान समेत गरे।
प्रा डा केसीको अनशनको नाममा सरकारलाई टिक्नै नदिने वितण्डा मच्चाउन खोजिएको छ भन्दै उनले पार्टी र सरकारको कामलाई समृद्धिको दिशातर्फ एकजुट भएर लाग्नुको विकल्प नरहेको बताए।
प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ १३:३६
लन्डन — नेप्लिज डक्टर्स असोसिएसन यूकेले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै २५ दिनदेखि अनशनरत चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा ऐक्यवद्धता जाहेर गरेको छ ।
एशोसिएसनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारलाई केसीको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर हुन र समस्या यथाशक्य छिटो समाधान गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवासँगै स्वास्थ्य शिक्षा र तालिम सुधारका लागि नेप्लिज मेडिकल असोसिएसनसँगआफ्नो ऐक्यबद्धता रहेको समेत डक्टर्स एशोसिएसनले जनाएको छ ।
चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि पटकपटक अनशन बस्दै आएका डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ १३:२२